🥇 ▷ Faahfaahinta cusub ee dagaalada, tartamada iyo ciyaarta tooska ah ee Seefaha 'Pokemon Sword' & amp; Gaashaanka ayaa la muujiyey ✅
Faahfaahinta cusub ee dagaalada, tartamada iyo ciyaarta tooska ah ee Seefaha ‘Pokemon Sword’ & amp; Gaashaanka ayaa la muujiyey
Shirkadda Pokémon waxay shaaca ka qaadday faahfaahin badan oo ku saabsan Seefta & Gaarka loo yaqaan ‘Pokémon Sword & Shield’ a War-saxaafadeed taasi oo diiradda saareysa dagaalladii Pokémon, oo sida muuqata aan ula dagaallami karno tababarayaasha kale ee khadka tooska ah annaga oo aan u baahnayn koox runtii, maadaama aan kireysan karno.
Sidoo kale, faahfaahinta dheeriga ah ee la muujiyey, shaki badan ayaa soo baxa sidaas darteedna waxay ahaan doontaa ilaa ciyaarta la heli karo bisha November. Wax yar ayaan kuu sheegayaa waxa imanaya.
Farsamooyinka cusub ee ugu horreeyay ee ay muujiyeen waxay noqon doonaan “xarun” dagaalladii Pokémon, waxaa lagu magacaabi doonaa “Dagaalkii Kubadda Cagta” waxayna umuuqataa inay noqon doonto marxaladihii dagaalka ee ay ku soo bandhigayeen barnooyinka bilooyinkii. Booskaani wuxuu u yahay shisheeyaha sheekada ugu weyn ee ciyaarta, waxaan u maleynaynaa inaan u baahanahay inaan ku furno mar uun maadaama ay ka dhacdo kulamada kale ee Pokémon laakiin sheekadu kuma joogsan doonto tan.
Marka halkaas waxaan dooran karnaa inaan u tartanno si tartan ama qaab aan caadi ahayn. Qeybta hore waxaan heysan doonaa ilaa 5 xabo oo aan ku habooneyn karno waqtiga: rookie, Poké Ball Tier, Super Ball Tier, Ultra Ball Tier iyo Master Ball Tier. Waxay u shaqeyn doontaa sida cayaaraha kale oo kale oo ah adeeg xilli xilli ilaa waqti ah, guulo ayaa la macno ah in lagu daro dhibco si loogu daydo in la gaaro darajada xigta iyo guuldarooyinka kale.
Tartanka aan caadiga ahayn waa sida ay u muuqato, ma aha inaad ka walwasho inaad guuldareysato ama guuleysato, waa ikhtiyaar inaad tijaabiso waxyaabo qaar, xirfado aan caadi aheyn ama Pokémon si aad u aragto haddii ay ku guuleysan karaan tartanka iyo haddii kale. Ama waxaa laga yaabaa inaad sida kaliya ee aad doorbidayso inaad uga fogaato raaxo-darada iyo walwalka.
Labada qaabba waxaan fursad u yeelan doonnaa inaan sameysanno labo ama mid caadi ah 1 a iyo 1 dagaalyahanno, dagaallo laba geesood ah waxaan ku xakameyn karnaa labada Pokémon sidii kuwii hore. Lama shaacin in ay jiri doonaan ku-simeyaal badan oo maxalli ah iyo in kale, waxay umuuqataa ikhtiyaar muuqda laakiin midkoodna lama sheegin.
Waxaa sidoo kale shaaca laga qaaday inaan ka soo dejisan karno kooxaha kale, u kireysano qaab si ay ugu ciyaaraan garoonka. Tani waa qayb xiisa badan maxaa yeelay tani waxay ka dhigan tahay inaan ku ciyaari karno tartamo anagoon xitaa taariikhda ku ciyaarin, waxaan si fudud u kiraysan lahayn Pokémon, wax horay uga dhacay garoonka Pokémon Stadium ee N64. Taasi waxay tiri, lama sheegin haddii tani loo oggolaanayo tartamada.
Isaga oo ka hadlaya tartamada ayaa xusay in ay jiri doonaan qaar si rasmi ah u abaabuli doona Game Freak waqti ka waqti, waxaan ku guuleysan karnaa casuumada tartamadaas hadii aan heysano darajo gaar ah ciyaarta oo ay heli doonaan abaalmarino xiisa leh. Waxaa sidoo kale jiri doona tartamo ay qabanqaabinayaan ciyaartoy kale, waxaan u maleynaynaa inay kuwani heli doonin abaalmarino intaa ka badan oo aan ognahay inaad ku guuleysatay inkastoo tan wali la arki doono.
Warka keliya ee xun, in kasta oo la filaayey, ayaa ah inaan u baahan doonno rukhsad khadka tooska ah ah si aan u awoodno inay galaan garoonka Kubadda Cagta, oo runtii ah dharbaaxo hooseysa isla markaana muujineysa in astaamaheeda oo dhan ay ku jiri doonaan khadka tooska ah.
Dhanka kale, waxay umuuqataa in lacajsida ay ku imaanayso xoog maadaama oo dhamaan ciyaarta Pokémon ay noqon karaan kuwo leh koox makaanik ah, dhaqdhaqaaqyadooda qaar waxay lahaan doonaan dhaqdhaqaaqyo kaladuwan iyo, waxaa kasii muhiimsan, waxay lahaan doonaan saameyn kala duwan maxaa yeelay dynamax ayaa sameysa iyaga xoog badan. Tusaale ahaan weerarada biyaha ee weerarada ka dhigaya inay roob bilaabaan oo Fire Pokémon ay waxyeellada ka yar gaarto.
Ugu dambeyntiina waxaan leenahay xirfadaha qarsoon, Corviknight, oo ah mid ka mid ah hal-abuurka cusub, waxaa laga yaabaa inuu leeyahay wax loogu yeero “Saamaynta Muraayadda” oo dib ugu laaban doonta kooxda ka soo horjeedda Pokémon weerar kasta oo loogu talagalay in lagu yareeyo tirakoobkayaga. Sidan, Corviknight wuxuu u noqon doonaa kahortaga waxyeeladaan ilaa iyo inta uu leeyahay awooddan qarsoon.
Si taa loo helo, sida muuqata waa inaan kaqeyb galno dagaalada Dinamax ee lagula jiro hogaamiyaasha AI maamusho, tani waa fikir toos looga soo qaaday Pokémon GO, Pokémon kuwanu waxay u shaqeyn doonaan sidii hogaamiyayaashii duullaanka waxayna noqon doonaan kuwo xoogan oo aan ku qasbanahay inaan ku biiro tababarayaasha kale si aan u awoodno in laga adkaado.
Dhamaadka dagaalka waxaan fursad u yeelan doonnaa inaan qabsanno Pokémon tanna tan waxay fursad u leedahay inaad yeelato xoog qarsoon, tani badanaa waxay leedahay saameyn xoog leh oo looma tusi doono kuwa la tartamaya ilaa uu ka garto dagaalka.
Pokémon Sword & Shield ayaa si rasmi ah u bilaabi doonta Nintendo Switch November 15